राजनीति « Drishti News – Nepalese News Portal
सहज संसद सञ्चालनका लागि सभामुख परामर्शमा, शीर्षनेताहरुले सम्बोधन गर्ने
काठमाडौं । गत आइतबार कार्याव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक नबोलाएको भन्दै रुष्ट बनेका दलहरुसँग सभामुख अग्नि सापकोटाले परामर्श थालेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आज (बुधबार)को बैठक सहजरुपमा
प्रकाशित मिति : १ month अगाडि
एमाले र माओवादी केन्द्र दुबैले सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकन नगर्ने
काठमाडौं । एमाले र माओवादी केन्द्र दुबै सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्ध पुनरावलोकनमा नजाने भएका छन् । एमाले फैसला कार्यान्वयनको पक्षमा उभिएपछि माओवादी केन्द्र पनि पुनरावलोकनमा नजाने भएको हो । सर्वोच्च
नयाँ सत्ता समिकरणबारे छलफल गर्न माओवादी केन्द्रको बैठक बस्दै
काठमाडौं । नयाँ सत्ता समिकरणबारे छलफल गर्न नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटीको आज (बुधबार) पनि बस्दैछ । पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा बोलाइएको बैठक पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित हुनेछ । बैठकमा केपी
एमाले र माओवादी केन्द्र व्यूँतिएपछिको पहिलो संसद बैठक आज बस्दै
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक आज दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र औचापरिकरुपमै अलग–अलग भएपछि प्रतिनिधिसभाको यो बैठक पहिलो हो । यो बैठकमा एमाले
दृष्टिका १० हेडलाइन्स् : जसपालाई एमालेको उपसभामुख प्रस्तावदेखि प्रचण्डको दिनभरको कसरतसम्म
हेडलाइन्स् : १. नेकपा (एमाले) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले बनाए संयुक्त कार्यदल, सत्ता सहकार्यलगायतका विषयमा वार्ता गर्न एमालेकोे तर्फबाट उपमहासचिव तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ
प्रचण्डलाई छोडेर ओलीतिर गए पासाङ शेर्पा र टंक आङबोहाङ
काठमाडौँ । साविकको नेकपामा माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दुई केन्द्रीय सदस्यले माओवादी छोडेर एमालेमा समाहित भएका छन् । प्रदेश नम्बर १ का संसदीय दलका उपनेता समेत रहेका केन्द्रीय सदस्य
सरकार गिराउने र टिकाउने कसरत : ओली–प्रचण्ड कांग्रेस र जसपाको शरणमा !
काठमाडौं । सर्वोच्चले सत्तारुढ नेकपा खारेज गरेपछि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युँतिएसँगै सरकार गिराउने र टिकाउने खेल सुरु भएको छ । पूर्व माओवादी केपी शर्मा ओलीलाई कुनै पनि
सत्ता साझेदारीका लागि जसपाले कार्यदल बनाउने, उधारोमा सहमति नगर्ने
काठमाडाैँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले सत्ता साझेदारीका लागि पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने भएको छ । समाजवादी पार्टीको मंगलबार बसेको संसदीय दलको बैठकले एमाले,कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग वार्ताका
पूर्वमन्त्री जोशीको अवस्था बिग्रिएपछि पुनः भेन्टिलेटरमा
काठमाडौं । मष्तिष्कघात भई नर्भिक अस्पतालमा उपचाररत नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीलाई पुनः भेन्टिलेटरमा राखिएको छ । गत फागुन १४ गतेदेखि थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालमा उपचाररत जोशीको स्वास्थ्यमा क्रमिक
ओली सरकार ढाल्न प्रचण्डको दौड, देउवा र भट्टराईको साथ लिन निवासमै भेट
काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्कपकमल दाहाल प्रचण्डले जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईसँग भेटवार्ता गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि साविककै दल माओवादी केन्द्रको मंगलबार बसेको स्थायी कमिटीको
दृष्टिका १० हेडलाइन्स् : माधव समूह निर्वाचन आयोग पुगेदेखि प्रदेश २ को नाम ‘मधेश’ प्रस्तावसम्म
हेडलाइन्स् : १. नेकपा एमाले वरिष्ठ नेत माधवकुमार नेपाल समूह निर्वाचन आयोगमा, पार्टी अध्यक्ष केपी
माओवादीको स्थायी समिति बैठक सोमबार बस्ने
काठमाडाैं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को स्थायी समितिको बैठक सोमबार बस्ने भएको छ । समसामयिक
काठमाडौं उपत्यकाका विद्यालय बन्द गर्न प्रजिअको सुझाव
काठमाडौं । काठमाडौँ उपत्यका तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कारोना भाइरस संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै
बाँके दुर्घटनामा मृत्यु भएकाहरुको सनाखत, घाइते सातको अवस्था गम्भीर
बालुवाटारमा हुने बैठकमा सहभागी नहुने प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीलाई सन्देश
आयोगले थाल्यो उपनिर्वाचनको तयारी, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशको निर्वाचन एकैपटक
कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत पाउलान ?
एमसीसी पेश नगरेकाले सभामुखसँग प्रधानमन्त्री रुष्ट
२०७७ साल सार्थक रह्योः प्रधानमन्त्री